दाङमा मोटरर्साइकल दूर्घटना हुँदा एक विद्यार्थीको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर - SudurSanchar
दाङमा मोटरर्साइकल दूर्घटना हुँदा एक विद्यार्थीको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
December 12, 2020 December 12, 2020 adminLeaveaComment on दाङमा मोटरर्साइकल दूर्घटना हुँदा एक विद्यार्थीको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर
मङ्सिर २६, दाङ । दाङको देउखुरीमा मोटरसाईकल दूर्घटना हुँदा एक जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ ।
अर्का गम्भीर घाइते भएका छन् । जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ का १८ बर्षीय मनोज अधिकारीको उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा शुक्रवार दिउँसो साढे ४ बजे मृत्यु भएको छ ।
उक्त दूर्घटनामा परि गढवा ४ का १९ बर्षीय प्रविण कार्की गम्भीर घाइते छन् । उनको पनि कोहलपुरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता डिएसपी सुमित खड्काले जानकारी दिए ।
शुक्रवार दिउँसो सवा २ बजे लमहीवाट गढवा तर्फ जाँदै गरेको तीव्र गतिको लु ५३ प २१३७ नम्वरको मोटरसाईकल अनियन्त्रित भइ लमही नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित कलभर्टमा दूर्घटनामा परेको थियो ।
दुबै जना घाइतेलाई लमहीमा प्रारम्भीक उपचार पछि थप उपचारका लागि बाँकेको कोहलपुर रेफर गरिएको थियो । उनीहरु दुबै जना लमहीस्थित रोजीबोर्ड बोर्डिङ स्कूलमा प्लस टुमा अध्यनरत विद्यार्थी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
पढाइ सकेर घर फर्किदै गर्दा उनीहरु दुर्घटनामा परेको प्रहरीले बताएको छ । मोटरसाईकल कस्ले चलाएको थियो भन्ने अझैं खुलि नसकेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख सई पुरन मल्ले जानकारी दिए ।
दुबैजनासंग सवारी लाईसेन्सपनि फेला नपरेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरुले चलाएको मोटरसाईकल पनि तेस्रो व्यक्तिको हो । उनीहरुले मागेर चलाउन भनि ल्याएको भन्ने खुल्न आएको प्रहरीले बताएको छ ।
हार्दिक बधाई : अभिनेत्री रेखा थापाले यी समाजसेवी केटासँग यो मितिमा बिहे गर्दै ?
बि’रामी हुदा समेत छोडेन पा’पी श्रीमानले, खु’कुरीले का’ट्छु भन्दै यस्तोसम्म गर्यो… (हेर्नुस् भिडियो)
दुखद खबर, दैलेखमा फेरि बस दु’र्घटना।
रौतहटमा एक किशोरीको ब’ल’त्का’र गरी ह’त्’या भएको छ।